Ngiwuthola kanjani umbhobho wami ukuthi usebenze ku-Rock Band? - Abashayeli
Main > Abashayeli > Umshayeli wemakrofoni we-Rockband - imibuzo ejwayelekile
Umshayeli wemakrofoni we-Rockband - imibuzo ejwayelekile
Ngiwuthola kanjani umbhobho wami ukuthi usebenze ku-Rock Band?
Ungakwenza kanjaniSebenzisaukuI-Rock Band Microphonenjenge-PCKancane
Faka ukuphela kwe-USB kweyakhoI-Rock Band Microphonekunoma iyiphi imbobo evulekile ye-USB kwi-PC yakho noma kwi-Laptop. ...
Ngokuya ngohlobo lwakho lwe-Windows, ungacelwa ukuthi uvumele iWindows ukuthi ifune umshayeli. ...
IWindows izofaka futhi ilayishe umshayeli weLogitech USBImakrofoni.
Sanibona bafana futhi wamukelekile kulo mdlalo, ukube ubukhona ngesonto eledlule uyakhumbula ukuthi le Appel Mike encane sayenzela cishe amadola amabili. Chofoza lapha ukuze ubuke lesi siqephu, kuleli sonto sizodlulela egiyeni lama-movie wesabelomali ngokwenza imakrofoni encane ye-cardioid ongakwazi ukuyixhuma ebusweni babantu aka stick mic kulungile asihambe uyothola imic mic yakho esiyisebenzisile kusukela ku-rock band uzodinga futhi i-solder ne-iron soldering i-jackphone eyinhloko yamamilimitha amathathu nesigamu kanye nezingxenye zethu zomgqomo besinezintambo ezimbili eyodwa esivele inamathiselwe ngakho-ke sizokusebenzisa lokho kuphela, uzodinga neshubhu lendandatho kapende uma awunakho lokho, awukwazi ukusebenzisa ithephu kagesi uma usebenzisa ukushisa kweshubhu uzodinga okokukhanyisa ukuze ukufudumeze futhi njengenjwayelo i-multitool yami engiyithandayo manje sekuyisikhathi sokulungiselela imakrofoni yakho igama lami linamathiselwe kuleli bhokisi engingalisebenzisanga thintana ngakho-ke uvele wayinquma futhi manje usebenzisa i-multitool yakho ukulahla uthayi wokuvala okuvela kwikhebula le-rock ribbon elidalula izintambo ezimbili ngaphakathi, uthathe ucingo olungaboshiwe bese uqala ukulujija. Uzodinga ukwenza lokhu ukuze uthinte kamuva.
Manje susa kancane phezulu kocingo oluvikelwe bese uqala ukuluhlanekezela ukuze uqiniseke ukuthi usika ucingo isikhathi esanele ukuze ukwazi ukudlala ngeshubhu ethile yokushisa manje sekuyisikhathi sokubamba insimbi yakho yokunamathisela. Qala ukufaka izingcingo zombili ezinhle nezimbi kumakrofoni yakho ye-rock band manje ake sizwe olunye uhlangothi bekungafanele ngithenge amajack amasha njengoba ngithole ucingo ezingxenyeni zami zomgqomo obesevele unokuphela kwento efanayo edingekayo ukwahlukanisa ukwembula izintambo ezimbili ngaphakathi.Uma ubonile i-pc mic hack yami ngesonto eledlule, uzothola ukuthi ikhebuli yethu esiyisebenzisayo inezintambo ezintathu ngaphakathi, kepha bekulula ukwedlula eyakho i-Solder iron futhi bese uqala ukuthayipha uhlangothi ngalunye Manje isikhathi sokuvala lesi siguli, thatha ummese wakho bese usika ukushisa okushisayo ngesigaxa se-White Mage ufunani lapha? ngaphuma endleleni lapho ikati lami linquma ukuthi alifuni ukusiza Ngabamba ukushisa kwami ​​kokushisa kweshubhu ngehla ngentambo ngabuye ngasika isiqeshana esincane ukuze sithathe indawo yesihlangu esilahlekile ngasibeka phezu kwekhebula, manje Isikhathi sokuphinda uthinte i-iron soldering futhi.Thatha izintambo ezimbili ezivikelekile bese uzihlanganisa ndawonye, ​​khona-ke ungaslayida ukushisa kwakho ukushwabanisa ngaphezulu kokufakwa okushodayo, usebenzise incwadi yakho bese uyicisha ngakwesokudla, bamba i-iron soldering bese uqala ukusonta olunye uhlangothi ndawonye.
Manje thatha ucezu olude lokushwabanisa lokushisa bese uluslayida phezu kwalo. Konke bekukulingane kahle ngakho bekumele ngiziqeqeshe isikhashana kepha ngikwazile ukukuthola manje thatha ukukhanya kwakho bese uqala ukushisa ishubhu elincishisa ukushisa lokhu yenze ilingane kahle Manje usuqedile ukugenca umbhobho wakho we-rock band ukuze umbhobho wenziwe mhlawumbe ngiyazibuza ukuthi uzwakala kanjani. Ngisebenzisa le mic ukulandisa ukwakhiwa kwami ​​kokugcina okubili, ngakho-ke uzwile ngokubuza ukuthi kunjani lokhu? Umsindo wokukhansela imisebenzi ake siye kumbhali wethu wezindaba uJamie osemigwaqweni uJamie ngibonga uJamie, ngimi lapha emgwaqweni omatasa ukukunikeza umbono wokuthi i-rock band isebenza kanjani futhi manje umbhobho we-rock band manje usisihambeli sami lapha namuhla uJerry Jerry Ungathanda ukusho amagama ambalwa Cha? Oh finepupernickel engikubonga ngedwa ukubuyela emuva kuwe Jamie, ngiyabonga Jamie, ngibona ukuthi ukubukeka okuncane kuhluke kakhulu kunokwakheka kwakho yiluphi uhlobo lomoya ovunguzayo ngaphezu kwalokhu ngakho-ke ngakhe leli thuba lomoya leli sokisi elidala impela liyisokisi elidala lezemidlalo , yebo buka lokho Manje bheka lokhu njengoba sihamba, kukunikeza umbono wokuthi kwenzakalani, ngiyabonga uJamie, lowo bekunguJamie embika futhi isivakashi sakhe sishaqekile namuhla njengoba ungizwa Sika i okuningi, kepha lokho kungalindelwa uma usebenzisa irekhoda encane yokuthengiselana enjengalena engenakho ukubonisa esikrinini futhi ngisho nalo mfana omncane awukwazi ukulungisa amazinga ngendlela esasiyiyo futhi enkulu Ingxenye yokunqunyulwa ibinomthwalo, yize besimi eduze komunye nomunye futhi besingezwa nhlobo.
Umbhobho uvimbe ingxenye enkulu yomsindo ongaphandle. Ukulandisa kwethu kwesimo sedemo kukunikeze umbono wokuthi imakrofoni ingenzani futhi ngiyethemba ukuthi lokhu kukunikeza imibono yokuthi ungaba nezinto ezimbalwa endlini ezingakulungela ukwenza kwakho ifilimu, ngiyabonga ngokubuka abafana. Ungakhohlwa ukuvula isonto elizayo uma uthola ukuthi ngenza okungaphezulu kakhulu kokufundisa ngokwenza amafilimu futhi ngibone izinkathi zokukhempa zigcwele kungani singazenzi ezinye izifundo zokukhempa kuze kube ngesonto elizayo Hey bafana futhi siyakwamukela embukisweni namuhla, sizokwakha imakrofoni yomsindo ongayisebenzisa kuthrafikhi.
Hlala wazi ukuthi uzofuna ukuthuthukisa le mic kungekudala, kepha kuze kube yilapho ukwazi ukukhokhela le gear lokhu ngokuqinisekile kuzohlala esikhwameni sakho sokwenza amafilimu nezimpahla zakho noma ngabe iseluleko sami singabuyela kuwe Jamie
Ngingakwazi ukusebenzisa i-rock band mic kukhompyutha yami?
Konke uzodinga ukuxhumaimakrofoni yakho ye-Rock Bandkuya komuntuikhompyuthaiyimbobo ye-USB engenalutho. ... Qala ukuqopha ngamadijithi ngei-Rock Band mic yakhonamuhla.Septhemba 11 2008
Ingabe i-rock band mic imakrofoni enhle?
Ikhwalithi yomsindo ishaya nje konke okunye engikusebenzise, ​​futhi wonke umuntu ongizwile kuso uthi kuzwakala kangcono kunanoma yini enye abezwile ngayo. Futhi, kuyasebenzakuhlengobaI-Rock Bandfuthi Guitar Hero imidlalo. Njenge-USBumbhobho, ukusetshenziswa kwayo kukhulu ngesibalo, futhi ngiyincoma nakanjani cishe kuzo zonke.
Ngabe ungasebenzisa noma iyiphi imakrofoni ye-USB yeRock Band?
Noma iyiphi imakrofoni ye-USBuphawu nge Guitar Hero nomaRock Band kuthandawork, akunandaba ukuthi iyiphi i-consolebonaweza ne.
Ngingaxhuma kanjani i-rock band microphone yami kwikhompyutha yami?
Konke okuzodinga ukuxhuma imakrofoni yakho yeRock Band kwikhompyutha yakho kuyimbobo ye-USB engenalutho. Lesi sifundo esifushane, esinyathelo ngesinyathelo sizokukhombisa ngqo okufanele ukwenze (futhi uqondise abasebenzisi beWindows ngenqubo yokufaka umshayeli).
Ngingabatholaphi abashayeli be-mic yami?
Uma ungenayo i-CD namafayela wokufaka wemakrofoni yakho, okokuqala, zama ukuwathola kuwebhusayithi esemthethweni yomenzi. Uma ungabatholanga lapho, unganqikazi ukulanda abashayeli bemakrofoni mahhala kuwebhusayithi yethu. Kutholwe abashayeli abangu-1585 bemakrofoni abangu-123406. Kuboniswe ikhasi 1 kusuka ku-32.
Ngabe i-rock band MiC ingasetshenziselwa i-Excel?
Qala ukuqopha ngokwedijithali nge-mic yakho ye-Rock Band namuhla. Ufuna ukwazi kahle i-Microsoft Excel bese uthatha amathuba akho okusebenzela ekhaya uye ezingeni elilandelayo?
Yimuphi umshayeli wemakrofoni we Windows 10?
I-Microphone Drivers Driver Name Date Operating System OS Architecture Usayizi Wefayela Samsung 02.12.2019 Windows 10 x64 11.76 KB MSI 01.12.2019 Windows 10 x64 11.98 KB Fujitsu 27.11.2019 Windows 10 x64 11.82 KB Asus 25.11.2019 Windows 10 x64 24.68 KB 30 ngaphezulu imigqa ...